विश्व योग दिवसमा पोखरामा प्रभातफेरि. – Sabaikoaawaj.com
विश्व योग दिवसमा पोखरामा प्रभातफेरि.
बुधबार, असार ७, २०७४ 9:14:30 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, ७ असार/तेस्रो विश्व योग दिवसका अवसरमा पोखरामा प्रभातफेरि निकालिएको छ । ‘गरौं योग, रहौं निरोग’ नाराका साथ मनाईएको यो दिवसका अवसरमा बुधबार पतञ्जली योग समिति, कास्कीले प्रभातफेरि निकालेको हो । भारी वर्षाबीच पनि प्रभातफेरिमा योगापारखीले सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रभातफेरिमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, पश्चिमाञ्चलका पूर्व सह क्षेत्रीय प्रशासक दिवाकर बास्तोला सहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, उद्योगी व्यवसायी, योग शिक्षक तथा अन्य योग साधकहरूको सकृय सहभागिता रहेको समितिका सञ्चार प्रभारी एवं योग प्रशिक्षक रश्मी भण्डारीले जानकारी दिईन् ।
पोखराको मानवअधिकार चोकबाट अञ्चल प्रभारी दिपक सिग्देलबाट पवित्र मन्त्रोच्चारण गरी प्रभातफेरि सुरु भएको थियो । सो अवसरमा पूर्व सहक्षेत्रीय प्रशासक बास्तोला, समितिका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र लालचन लगायतले बोलेका थिए ।
समितिका अध्यक्ष परमेश्वर दाहालले योगको बारेमा प्रकाश पार्दै उपस्थित सबैलाइ धन्यवाद सहित समापन गरेका थिए । कायक्रमको संचालन समितिका मन्त्री मित्रलाल सुवेदीले गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, असार ७, २०७४ 9:14:30 PM